RAVELONANOSY MAMITIANA : MISAVOROVORO NY SAIN-DRAJOELINA – MyDago.com aime Madagascar
Misavorovoro ny sain-dRajoelina ary tsy maharaka ny zavamitranga hoy ny Ct Ravelonanosy Mamitiana androany teny amin’ny Magro Behoririka. Ny ilazana izany hoy izy dia izao, tratry ny tampoka ny lehilahy ka rehefa nanao fanambarana ny filoha Ravalomanana Marc dia tsy araka ny noeritreretiny. Ny frantsay izay nianteherany dia tsy ohatra ny taloha intony. Izay no nahatonga azy hiteny hoe aleo aloha hieritreritra tsara. Raha nandeha tany amin’ny Sadc na ny frantsay izy hoy Mamitiana dia nidona tamin’ny rindrina ary raha niverina eto an-toerana aza dia miady an-trano ny namana ka tsy hita izay handaminana azy. Noho izany
hoyity olomboantendry ity, dia voahidy tanteraka Rajoelina. Mikasika ny frantsay hoy izy dia mila dinihantsika tsara ihany fa misy ireo frantsay miaraka amin’ny frantsa afrika izay saribakolin’ny manongam-panjakana, vazaha an-taratasy izay mitazona hatrany ny krizy
mba ahazoana tomboantsoa mihompampana. Amin’izao krizy izao hoy izy dia misy hatrany ny resaka petrole ary tamin’ny andron’ny filoha Ravalomanana Marc no tokony hivoaka izany ary nampanankarena ny malagasy. Atao izay ahazoana mitazona maharitra ny tetezamita hoy
Mamitiana, maka tany sns, izay noeritreretintsika ho halatra ary mbola mitohy amin’ny andramena satria io harena io dia izay mihinana miaraka aminy ao ny sinoa sy frantsay. Misy ny voakitikitika hoy Mamitiana ka tsy mahatanty ny tena fahamarinana ireto lehiben’ny mpanongam-panjakana ireto. Noho izany dia mila mailo isika satria misy ny fratsay miray tsikombakomba amin’izy ireo. Misaotra ireo frantsay mpitondra isika hoy izy satria izy ireo nametraka fa avelao hamaha ny olany ny Afrikanina fa tsy mampandroso ny fitsabatsabahana. Noho izany dia mahatoky isika amin’izao fotoana izao fa hitazona ny teniny
hatramin’ny farany izy ireo. N’inon’inona filazany rehefa miverina avy any dia ny antsoka tsotra avereno amin’ny taniny ny jiosy izany hoe tsy maintsy mody i dada. Misy ny feo mandeha omaly hoy Mamitiana fa nivoaka ny gadra politika ka nefa rehefa nanontaniana ny namana dia
nilaza fa tsy ao ry Noely , Raoelina sns.. Raha ny marina hoy izy dia misy sinema anehoana fa misy fitoniana politika eto. Amintsika dia tsotra ihany tsy misy fitoniana izany eto fa na ny voalaza ao amin’ny tondrozotra aza da mazava be fa mivoaka daholo ny gadra politika. izay
no fitoniana politika fa tsy hoe misy olona avoaka noho ny fisalasalana dia alefa gazety. Ny fivoahan’ny gadra politika rehetra no hampisy ny fitoniana politika eto. Tsotra ny anay hoy izy dia ny fanatanterahana amin’ny antsipiriany ny tondrozotra indrindra ny andininy faha 16, 17, 19, 20. Misy mikonokonona fanendrena mpitsara hanao fampihavanam-pirenena hoy Mamitiana any ho any. Ny fanendrena ireo olona ireo anefa dia tsy nanaiky na ny tao an-tanana na ny
governemanta. Hatramin’izao ihany koa hoy izy dia tsy misy mipetraka ny lalànan’ny famontsoran-keloka. Raha vao misy mpifanandrin
Auteur Solo Razafy*Publié le 21 décembre 2012 21 décembre 2012 Catégories Politique
Précédent Article précédent : NAIKA ELIANA : TSY MATAHOTRA IZANY ENQUETE IRAISAMPIRENENA IZANY IZAHAY
Suivant Article suivant : TSY MILA AN-DRAJOELINA IZAHAY